Gudniinka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Faa'iidooyinka + > Gudniinka
Gunnadayada gudniinka waxay khuseysaa carruurta ka yar 18 sano jir.
CHPW waxay daboolaysaa ilaa $ 200 xagga gudniinka aan caafimaad ahaan daruuriga ahayn ee canug walba. (Gudniinka lagama maarmaanka u ah caafimaadka waxaa daboolaya gobolka.)
Gudniinka aan caafimaad ahaan loo baahnayn waa ikhtiyaar, looma baahna.
Gargaarku wuxuu khuseeyaa carruurta ka yar 18 sano.
Cunug walba oo loo qoondeeyo lab markuu dhalasho ee qoyska wuu u qalmaa.
Shabakad furan: Dhakhtarka hawsha fulinaya qasab kuma aha inuu qandaraas la galo CHPW; waxay kaliya u baahan yihiin inay diyaar u yihiin inay biil u diraan CHPW.
Lacag kasta oo ka sareysa $ 200 waa masuuliyada xubinta.
Waa maxay gudniinku?
Dhalashada, dabool maqaarka ah oo la yiraahdo buuryada wejiga ayaa gasha madaxa guska. Gudniinku waa hab dhaqtar takhtarku ka gooyo buuryada. Nidaamka sida caadiga ah waxaa la sameeyaa wax yar uun ka dib marka ilmuhu dhasho, in kasta oo sidoo kale lagu samayn karo nolosha dambe.
Gudniinka looma baahna, laakiin waalidiin badan ayaa tan u doorta carruurtooda oo loo qoondeeyey lab markay dhashaan. Qoysaska qaar waxay u doortaan gudniinka sababo dhaqan ama diineed awgood. Qaar kale waxay sidaas u sameyn karaan faa'iidooyinka caafimaad ee iman kara, sida halista yar ee infekshinka kaadi mareenka markii ilmuhu weynaado.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 13, 2021